Umthetho Wokuqothuka | Law & More | I-Eindhoven ne-Amsterdam
Umthetho Wokunqothula eNetherlands
Ukuthuthuka kwezimali okuthe xaxa nezinye izimo lapho izinkampani zingasakwazi ukukhokha abakweletwayo, kungenza inkampani idilike. Ukuqothuka kungaba yinkinga enkulu kunoma ngubani othintekayo. Lapho inkampani yakho inezinkinga zezezimali, kubaluleke kakhulu ukuxhumana nommeli wokungakwazi ukukhokha imali ngokweqile. Noma ngabe kuphathelene nesicelo sokuqothuka noma ukuzivikela ngokumenyezelwa kokuqothuka, ummeli wethu wokuqothuka angakweluleka ngokuthi iyiphi indlela necebo elingcono kakhulu. Law & More isiza abaqondisi, abaninimasheya, abasebenzi kanye nababolekisi bamaqembu afake izicelo zokuqothuka. Iqembu lethu lilwela ukuthatha izinyathelo zokunciphisa imiphumela yokuqothuka.
UNGTHANDA UKUTHOLA UKUSEKELWA NGOMTHETHO?
NGICELA UKUXHUMANA LAW & MORE
Ukuthuthuka kwezimali okuthe xaxa nezinye izimo lapho izinkampani zingasakwazi ukukhokha abakweletwayo, kungenza inkampani idilike. Ukuqothuka kungaba yinkinga enkulu kunoma ngubani othintekayo. Lapho inkampani yakho inezinkinga zezezimali, kubaluleke kakhulu ukuxhumana nommeli wokungakwazi ukukhokha imali ngokweqile. Noma ngabe kuphathelene nesicelo sokuqothuka noma ukuzivikela ngokumenyezelwa kokuqothuka, ummeli wethu wokuqothuka angakweluleka ngokuthi iyiphi indlela necebo elingcono kakhulu.
Law & More isiza abaqondisi, abaninimasheya, abasebenzi kanye nababolekisi bamaqembu afake izicelo zokuqothuka. Iqembu lethu lilwela ukuthatha izinyathelo zokunciphisa imiphumela yokuqothuka. Singeluleka ngokufinyelela ezindaweni ezinabantu abakweletwayo, sikwazi ukuvula kabusha noma sisize ezindabeni zomthetho. Law & More inikeza izinsizakalo ezilandelayo mayelana nokuqothuka:
• ukuhlinzeka ngezeluleko maqondana nokuqothuka noma ukuhlakazwa;
• ukwenza ukuqala kabusha;
• ukuhlelwa kabusha;
• ukweluleka ngesikweletu somuntu siqu sabaqondisi, abaninimasheya noma amanye amaqembu anentshisekelo;
• Ukwenza izindaba zomthetho;
• ukufayila ngokuqothuka kwabakweletayo.
Uma ungumuntu okweletwayo, singakusiza ekuqaliseni ilungelo lokumiswa, ukuqanjwa amanga noma ukusetha lapho unelungelo khona. Futhi singakusiza ekuphoqeleleni amalungelo akho okuphepha, njengelungelo lesibambiso nokubanjiswa kwempahla, ilungelo lokugcina isihloko, iziqinisekiso zasebhange, idiphozithi yezokuphepha noma isenzo ngenxa yokuhlanganyela nesikweletu.
Uma ukweleta, singakusiza ekuphenduleni imibuzo ephathelene namalungelo okuphepha ashiwo ngenhla kanye nobungozi obuhambisana nabo. Futhi singakweluleka ngokuthi umuntu okweletwayo unelungelo lokusebenzisa amalungelo athile kanjani futhi akusize uma kungenziwa ngokungafanele la malungelo.
NgokoMthetho Wokuqothuka, umuntu okweletwayo olindele ukuthi angakwazi ukukhokha izikweletu ezingekenziwa angafaka isicelo sokudilizwa. Lokhu kusho ukuthi okweletwayo unikezwa ukubambezeleka kokukhokha. Lokhu kubambezeleka kunganikezwa kuphela izinhlaka zomthetho kanye nabantu bemvelo abasebenza umsebenzi ozimele noma ibhizinisi. Futhi, singasebenza kuphela kumuntu okweletayo noma inkampani uqobo. Inhloso yalokhu kubambezeleka ukugwema ukuqothuka nokuvumela inkampani ukuthi iqhubeke nokuba khona. Ukudluliselwa kumnikeza okweletayo isikhathi nethuba lokuthola ibhizinisi lakhe ngokuhlelekile. Empeleni, le ndlela ivame ukuholela ezinhlelweni zokukhokha nabantu abakweletwayo. Ukudluliselwa emuva ngakho-ke kunganikeza isisombululo uma kungenzeka kufinyeleleke ukuqothuka. Kodwa-ke, abakweletwayo abahlali bephumelela ekutholeni amabhizinisi abo ngokuhlelekile. Ukubambezeleka kokukhokha ngakho-ke kuvame ukuthathwa njengembangela yokuqothuka.
Ngokuya koMthetho Wokuqothuka, umuntu okweletwayo, okulesi simo ahlulekile ukusikhokha, uzomenyezelwa ukuqothuka ngokomyalelo wenkantolo. Inhloso yokuqothuka ukuhlukanisa izimpahla zabakweletwayo phakathi kwabakweletwayo. Umuntu okweletwayo angaba ngumuntu ozimele, njengomuntu wemvelo, ibhizinisi lendoda eyodwa noma ubambiswano ngokujwayelekile, kodwa futhi nebhizinisi elisemthethweni, elifana ne-BV noma i-NV Umuntu okweletwayo angabhengezwa njengongenamali uma kukhona abantu okungenani ababili abakweletwayo. .
Ngaphezu kwalokho, okungenani isikweletu esisodwa kufanele singakhokhelwa, ngenkathi bekufanele. Kuleso simo, kunesikweletu esifunekayo. Ukuqothuka kungafayelwa isimemezelo somfakisicelo uqobo nangokuthi kufakwe isicelo sokweletwa oyedwa noma ngaphezulu. Uma kunezizathu eziphathelene nentshisekelo yomphakathi, iHhovisi Lomshushisi Womphakathi nalo lingafaka ifayela lokuqothuka.
Ngemuva kwesimemezelo sokuqothuka, iqembu elifaka insolvent liphulukana nokulahlwa kanye nokuphathwa kwezimpahla zalo ezingezokuqothuka. Iqembu elingakwazi ukukhokhela insolvent ngeke lisakwazi ukusebenzisa noma yiliphi ithonya kulezi zimpahla. Kuzoqokwa umphathi-thrasti; lo ngumphathi wamajaji ozobekwa icala ngokuphathwa kanye nokupheliswa kwempahla yezezimali eyehluleka ukukhokhela izikweledu. Umphathi-ke uzothatha isinqumo sokuthi kuzokwenzekani ngempahla yokuqothuka. Kungenzeka ukuthi umkhokheli wezemali afinyelele kulungiselelo nababolekayo. Kulomongo, kungavunyelwana ngokuthi okungenani ingxenye yezikweletu zabo izokhokhwa. Uma isivumelwano esinjalo singeke safinyeleleka, umkhokheli weziphathimandla uzoqhubeka nokuqothula ukuqothuka. Impahla izothengiswa bese imali ihlukaniswe phakathi kwabakweletwayo. Ngemuva kokuxazululwa, ibhizinisi elisemthethweni elibhengezwe ukuthi liyibhange lizochithwa.
Ngabe kufanele ubhekane nomthetho wokudonswa kwezimali futhi ungathanda ukuthola ukwesekwa okusemthethweni? Sicela uxhumane Law & More.